Global Voices teny Malagasy » Belarosia: Famoretan’ny Mpitandro Filaminana Ny Androm-Panoherana Tao Minsk · Global Voices teny Malagasy » Print
Belarosia: Famoretan'ny Mpitandro Filaminana Ny Androm-Panoherana Tao Minsk
Voadika ny 25 Jona 2011 11:51 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Belarosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Ny famoriam-bahoaka am-pahatoniana tao Minsk, izay nokarakaraina tamin'ny alalan'ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosianina iray malaza ao Belarosia sy firenena Sovietika hafa teo aloha, dia niafara tamin'ny fisamborana olona maherin'ny 450.  Ireo fisamborana, fampiakarana fitsarana sy fihazonana am-ponja faobe, na izany aza, dia toa tsy manakivy ireo mpanao fihetsiketsehana akory.
Famoriana am-pilaminana nokarakaraina tamin'ny aterineto
Ny andron'ny 22 Jona 2011 tamin'ny 7ora alina no nosafidiana hanaovana ny fihetsiketsehana (nankalazaina tamin'ny tenifototra #2206v1900  tao amin'ny Twitter ).
Ka ahoana, #Minsk? Ahoana no fomba ahazoana ny tahaka izao? -22 Jona 2011, sarin'ny hetsika nalian'i Anton Motolko, ao amin'ny Twitpic.
Fikambanana Vkontakte maro no nitsangana mba handrindràna ny hetsika atao; “Hetsika hoan'ny hoavy ” [ru] no iray isan'ny tena nalaza, izay nanakaiky ny 214,000 no mpikambana.
Kanefa ny polisy, tsy vitan'ny hoe nanenjika  fotsiny ireo mpandrindra ny vondrona, fa niantso  [ru] ihany koa mpikambana tsotra toy ny mahazatra (ireo izay hitan-dry zareo) mba hifandinika ho fisorohana, ka nandritra izany no niezahan-dry zareo nanakiviana ny olona tsy handray anjara amin'ilay famoriam-bahoaka.
Mirotsaka ao amin'ny aterineto ihany koa ny fitondram-panjakana
Ny fitondrana Belarosiana, ho fanampin'ny fampiasana herisetra, ny sivana, ary fiampangàna, dia nisafidy ny tsy hanao tsinontsinona ny Twitter ihany koa. Tany amin'ny Aprily 2011, ny Minisitry ny Atitany Belarosiana dia nanomboka  [ru] nampiasa ireo kaonty @mvd_by  [ru], ary ny Departemantan'ny Polisin'i Minskt (@GUVD_Minsk  [ru]) no nanaraka.
Nandritra ny fihetsiketsehana, tena navitrika tamin'ny fandefasana bitsika ireo kaonty roa ireo, nanakivy iureo nikasa handray anjara amin'ny hetsika, nandresy lahatra  [ru] fa ny hetsi-panovàna karakaraina amin'ny aterineto dia fandikàna tsotra izao ny lalàna Belarosiana. @GUVD_Minsk[ru] dia nitanisa (sady angamba nankalaza tena)  mivantana ny valin'adiny:
#1.Кто собирается «на плошчу», обратите внимание на посты @InternetRevolt  – он в открытую подстрекает вас, но отвечать придется вам!
#1. Aoka hitandrina amin'ny @fandrisihan'ny Aterineto izay rehetra hamonjy ilay “kianja” – mandrisika anao izy, nefa avy eo ianao ihany no ho voatàna ho tompon'antoka!
Singanina manokana amin'izany ny fampitandremana nataon'ny Ministra ny vahoaka mikasika ny mety hisian'ny fanameloana izay mandray anjara amin'ilay fikomiana tsy nahazoana alalàna, manoro hevitra azy ireo tsy haka sary ny fihetsiketsehana amin'ny alalan'ny finday sy tsy hila raharaha amin'ny Polisy, ary koa nanentana ny rehetra mba hitondra Pasipaoro hatrany.
Toa tsy nahatàna ny olona tsy hamonjy ilay fihetsiketsehana akory ny fanambaràna nataon'ny fitondram-panjakana tao amin'ny Twitter.
Ny fandrakofana ny #22o6v1900
Araka ny nambaran'ny Reuters , efa ho 1000 ny vahoaka voaangona tamin'ny famoriana tao Minsk tamin'ny 22 Jona. Ity lahatsary manaraka nalaina tao amin'ny Youtube ity dia nangonina tamin'ny lahatsoratra  fitantaràna nataon'ilay mpanoratry ny GV, Asteris Masouras:
Mpitoraka bilaogy sy mpilaza vaovao marobe amin'ny Aterineto no nandrakotra ilay famoriana. Isan'ireo tatitra an-tsary malaza nalefa tao ny avy amin'i Anton Motolko avy ao Minsk (@motolko  [ru]), euroradio.by  [ru].
Toxaby, mpitoraka bilaogy nanaparitaka  [ru] lahatsoratra nampiseho ireo sampana manokana ao amin'ny polisy nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanantitrantitra izy fa nandika ny lalàna velona ao Belarosia ny Polisy, ary namadika tamin'ny karazanà fiteny maro ilay lalàna mahakasika izany.
Ireo Polisy handeha hisambotra tovolahy iray mizotra milamina. Sary nalain'i Toxaby, mpampiasa LJ
“Ny fiantombohan'ny farany”?
Tao aminà lahatsoratra lava be iray ny mpandrindra ny tolona “Ho an'ny Fahafahana” no nanazava  [ru] ny dikan'ilay famoriam-bahoaka am-pahatoniana natao ny 22 Jona:
Voalohany aloha, tsy nampoizin'ny fitondram-panjakana ny fivadiky ny toe-draharaha toy izao, tsy vitany ny nanolotra (na nanery) ny tetikadiny manokana, ary izay no nahatonga azy ireo hiataka, mbola misalasala ny amin'ny fihetsika tokony hataony. […]
Faharoa manaraka izany, hita mazava fa tsy ampy ny herim-pamoretan'ny fitondram-panjakana hifehezany ny fipariahan'ny fihetsiketsehana manerana ny firenena, ary izany no tena tetika mahombin'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy afa-po.
Fahatelo farany, napetrak'ireo mpikarakara ny hetsika tamin'ny toeran'ny resy ho azy ny Governemanta sy ny sampan-draharahany manokana tamin'ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana sy fifaneraserana sosialy amin'izao fotoana: Tsy vitan'ireo olon'ny KGB ny hifehy ny hafainganan'ny fiantraikan'ny vaovao nentin'ny Aterineto.
Ny namako Volia Ch., tao amin'ny Facebook ihany, no nanazava ny toe-draharaha tamin'ny fomba tsotra sady fohy:
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity iAsteris Masouras sy Tetyana Bohdanova.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/25/18776/
 fisamborana olona maherin'ny 450.: http://www.washingtonpost.com/world/europe/kgb-in-belarus-traces-social-media-activists-to-prevent-opposition-youth-rally/2011/06/22/AGm9Y3fH_story.html
 Hetsika hoan'ny hoavy: http://vkontakte.ru/futuremovement
 hoe nanenjika: https://globalvoicesonline.org/2011/06/06/belarus-security-services-arrest-administrators-of-the-major-opposition-vkontakte-groups/
 nandresy lahatra: http://gazeta.ru/news/lenta/2011/06/22/n_1893785.shtml
 nitanisa (sady angamba nankalaza tena): http://twitter.com/#!/GUVD_Minsk/status/83456525162651648
 Araka ny nambaran'ny Reuters: http://uk.reuters.com/article/2011/06/22/uk-belarus-protests-idUKTRE75L65720110622